Shabaab oo xalay dagaal ku qaaday xaafado ka mid ah Degmada Af... | Universal Somali TV
Shabaab oo xalay dagaal ku qaaday xaafado ka mid ah Degmada Afgooye
Al-Shaabaab ayaa magaalada Afgooye xalay weerar ku qaaday kaasi oo uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii saldhig ciidamada dawlada Soomaaliya ay ku leeyihiin degmadaasi ay weerareen.
Dagaalkan oo hal saac ku dhawaad ka socday Saldhigaas ayaa ciidamada dawlada federalka Soomaaliya waxaa soo gaaray gurmadka kale iyadoo markii danbe ay Al-Shabaab uga adkaaday weerarkii ay kusoo qaadeen Saldhigaas.
Maamulka degmada iyo kan Gobolka oo aan la xiriirnay si aan wax uga weydiino weerarkan, waa ay inoo suurageli weyday inaan qadka telefoonka ku haleelno, balse ilo ku dhow ayaa inoo xaqiijiyay in weli uu socda baaritaanka ku aadan qaabka uu weerarka u dhacay.
Al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay weerareen fariisinkan Ciidamada ay ku leeyihiin xaafada Buula-fooliyo, intaasi kadib waxaa la geeyay Ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM, balse dhowaan ayay ka soo ruqaansadeen, taasi oo Shabaab u sahashay in ay markale weeraraan.
Kan-xigaItoobiya iyo Somaliland oo ka wada ha...
Kan-horeWafdiga Madaxweynaha oo maanta la fil...
47,170,320 unique visits